TÜVASAŞ dia amin'ny famokarana fiara misy lalamby haondrana | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara54 SakaryaTÜVASAŞ dia afaka mamokatra fiara mandeha amin'ny lalamby
11 / 02 / 2020 54 Sakarya, Railway, ANKAPOBENY, RAFITRA, Headline, Faritra Marmara, Tüvasas, TORKIA
tuvasas dia afaka mamokatra fiara mandeha amin'ny lalamby
Torkia kamu-Sen Filoha Önder Kahveci, dia hoy izy TÜVASAŞ tsy afaka ny famokarana lalamby fiara izay dehibe any ivelany ary ny akorany namaky.
Torkia kamu-Sen Filoha Önder Kahveci, Tiorka Fitaterana-Sen Filohan'ny Nurullah sainan'ny Torkia Wagon Industry A.Ş. (TÜVASAŞ) nitsidika. Ny sefo izay nihaona tamin'ny mpiasa teto dia nandeha tany amin'ny trano ara-tsosialy TÜVASAŞ. Ny filohan'ny sampan'i Sakarya an'ny sendikan'ny fanamafisana dia tonga koa nandritra ny fitsidihana. Torkia kamu-Sen Filoha Önder Kahveci nahita ny fanombanana ny mpikambana ao amin'ny asa fanaovan-gazety eto.
Toy izao ny fanambaran'i Kahveci: Izahay dia nahita maso fivoarana lehibe nandritra ny fitsidihanay TÜVASAŞ androany. Miarahaba ny mpiasa TÜVASAŞ rehetra aho noho ireo fivoarana mahomby ireo.
TÜVASAŞ dia nasaina namoaka fiaramanidina fiaramanidina herinaratra nasionaly tamin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana tamin'ny taona 2013.
INFRASTRUCTURE TANY amin'ny TÜVASAŞ
Mandritra ny fitsidihanay; Any TÜVASAŞ, noho ity tetik'asa ity, ny fanamboarana ny trano izay hamokarana Aluminium Bodies of Train Sets dia efa vita ary vita daholo ny lavanila vita amin'ny robotic modem izay ampiasaina ao amin'ny trano sy ny firenena, ary ny famokarana takian'ity fiara ity sy ny fotodrafitrasa takian'ny TÜVASAŞ Tsikaritray fa vita ihany koa ny zavamaniry izay ametrahana feta sy ny loko hoso-doko. Nianatra ihany koa izahay fa fiara 240 miaraka amina vatana aluminium dia azo vokarina isan-taona amin'ireto fotodrafitrasa napetraka ireto. Izahay dia nahita fa ny famokarana ireo vatan'ny fiaran-dalamby eto amintsika dia nanomboka tamin'ny fakana asa ihany koa.
Amin'ny fanatanterahana izany, ny TÜVASAŞ dia nahatratra ny mety ho iray tokana amin'ny firenentsika sy ny jeografika akaiky.
Miaraka amin'ity tetik'asa ity, izay nanolorana an'i TÜVASA we, dia hitanay fa nanomboka namokatra fiaran-dalamby Electric Electric Electric Sets amin'ny hafainganam-pandeha 160 km / h ary mitohy ny asa famokarana amin'ity lafiny ity.
MIARABABEHEVITRA FAHAGAGANA ARY FIKAMBANANA
Ankoatr'izay, tsikaritray fa ny TÜVASAŞ dia nanamboatra azy ho famatsiana ireo fitaovana ampiasaina ato amin'ity fiara ity sy ireo fiara rehetra vokarina manomboka izao, ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ASELSAN, izay mpianatry ny firenentsika momba ireo olana ireo.
Miaraka amin'ny traikefa azon'ny TÜVASAŞ momba izany dia hitanay fa ny Fiaran-dalamby mandeha amin'ny herinaratra dia efa natomboka ary efa ho vita.
NY VEHIKELY miaraka amin'ny tebiteby ambony ao amin'ny TYPES REHETRA
Tena mahafaly ny nahazoan'i TÜVASAŞ fanohanana lehibe avy amin'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa mba hahafahana mamelona bebe kokoa an'io hery io mba hahafahany manatontosa soa aman-tsara ny hetsika rehetra nataony hatramin'ny famoronana ireo fiara mpandeha haitao avo lenta amin'ny karazana rehetra.
Amin'ireo fiatoana ireo, ny TÜVASAŞ dia nahazo ny famokarana haingam-pandeha ambony haingam-pandeha, fiara Metro, fiara fiaramanidina Light.
Hitanay fa ny TÜVASAŞ dia nanao ny anjarany ho andrim-panjakana manavaka ary namokatra ho an'ny firenentsika sy ny fireneny miaraka amin'ny fahalalany sy ny fahaizany.
Miorina amin'ny fanambaràn'ny Filohantsika, miaraka amin'ny fanohanan'ny Minisitra, ny asan'ity fikambanana manavaka ity, izay miezaka ny ho eto an-toerana sy ny firenena, dia tsy maintsy natao 30 taona lasa izay. Misaotra ny Filohantsika sy ny Minisitra ary ny TCDD ny fanohanan'izy ireo an'i TÜVASAŞ ary mangataka izahay mba hitohizan'ireo fanampiana ireo.
Tena ilainay izany fanohanana izany satria hitanay fa nanapoaka ny akorany ny TÜVASAŞ ary afaka manao ny fiara rehetra mitondra mpandeha ary manafatra avy any ivelany, indrindra ny fiara vaventy haingana sy avo lenta. Fantatsika ny fomba manelingelina ny orinasa any ivelany sy ny solontenany. Vokatr'izany dia fantatsika ny hanovan'izy ireo ny zavatra ratsy sy fanodinkodinam-po tahaka ny nataon'izy ireo taloha mba hisorohana ireo zavatra rehetra ireo.Raha lasa izany, arahabaiko ny mpiasan'ny TÜVASAŞ rehetra, izay mpikatroka amin'ity tantara mahomby ity ary maniry ny hitohizan'ny fahombiazana. (The Sakaryayenihab)
TÜVASAŞ dia afaka mamokatra fiara fitaterana an-dalamby ao an-toerana sy avy amin'ny firenena
Ny Metrobus imported dia any am-pianarana indray
Tüpraş manafatra Locomotives avy amin'ny orinasa Stadler Soisa .. Well Hybrid Well ...
3 dia nametraka lalana ho an'ny Railway Erzincan-Trabzon
Inona no lalamby tambajotra any Torkia
Ahoana ny fomba fiasàn'i Baku Tbilisi Kars?
Ny fiara dia nijanona teo amin'ny Tram Line tany Bursa
Ahoana ny fiatrehan'ny fiara an-dalamby Uzungöl sy Sümela?
Tsy misy lanezy ao Uludag, ny toe-draharaha dia sarotra
Mpanafaka amin'ny toe-javatra mampalahelo ao amin'ny Station Metropolis Avcilar
Ny fampihenana ny trosan'ny Metro dia mahatonga ny tanànan'i Adana metaly amin'ny toe-javatra sarotra
Zonguldak Railway Station Artisan in Trouble
Marmaray sy Istanbul Ankara YHT?
Fiaran-jiro elektrika vatana
Fiara High Rail